Degmooyin aysan caruurta dalka ku cusub heleynin iskuul - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Degmooyin aysan caruurta dalka ku cusub heleynin iskuul
La daabacay tisdag 4 november 2014 kl 11.53
Fillipstad: Sharciga waa jabineynaa
Foto: Anna-Karin Lampou/Sveriges Radio
Qaabilaadda qaaxootiga degmooyinka dalka Sweden ayaan aheyn mid isku dheelitiran. Degmadda Fillipstad gobolka Värmland ayaa waayadan danbe qaabishay qaxooti faro badan, taas oo keentey in degmado aysan ka soo baxi karin ballanqaadka ah in caruurta oo dhan iskuul helaan.
- Waxaan jibneynaa sharciga, caruurtana ma helayan xaqa ay u leeyahiin waxbarasho, waano mid murugo leh ayuu yeri Jan Ulvforsen oo ah isku duwaha degmadda Filipstad u qaabilsan xanaanada caruurta, baridda afka hooyo iyo buugaagta waxbaridda caruurta dalka ku cusub.
Jan Ulvforsen waxuu u waramayey telefishinka SVT qaybta wararka, weriyaashana waxuu tusey goob cusub oo laga dhisayo iskuul cusub.
– Halkan waxaan ka dhiseynaa iskuul cusub oo ay dhigan karaan caruur dhan 60. Qaarkood dalka ayey ku cusub yahiin oo qaraabanimo ayaa lagu keenay. Haddii ay soo bataan caruurta la keenayo boosaska ma ku filnaanayaan, ayuu yeri.
Waxuu intaas raaciyey in 80 ka mid ah 200 ee arddeyda degmada yahiin kuwo dalka ku cusub, kalaaska koobaadna ayba yahiin kalo bar, nasiib xumo waxaan ku guul dareysanay ayuu yeri sommarka ka bacdii in aan helo macallimiinta xirfad leh sidaas daraaded ayey macallimiinteena hadda yahiin kuwo aan xirfad laheyn.
Fillipstad oo culeyska ugu badan fuuley
Sida laga soo xigtay ururka degmooyinka iyo gobladda Sweden SKL magaalada Filipstad ayaa ah degmadda culeyka ugu badan ka soo fuulay qaabiladda qaxootiga. Ka sakow in degmadaan ay qaabishey caruur badan oo keli dalka imatay iyo weliba qaraabadooda, degmadda sidoo kale waxaa ku yaala xaruumo dhow ah oo la dejiyo dadka magangeliyo doonka ah. Xaruumahan ayey laanta socdaalka Migrationsverket dejisaa xaqootiga dhawaanahaan dalka yimaada. Imminka xaruumaha xaqootiga ee degmadan waxaa ku nool ku dhawaad 500 oo ah qaxooti cusub.
– Sannadyo badan magaaladan Filipstad waxay qaabileysey qaxooti, inta badana dhibaato kalamo aanan kulmin. Haddase dhibaatada waa xaruumaha qaxootiga, waayo wax awood ah oo aan ku maamuli karno uma lehin, laanta socdaalka ayaa iska leh go’aanka ah halka ay ku oolayaan, ayuu yeri.
Tobankii mid soogalooti
Waxaa ku yeela degmadan hotell duugoobey oo imminka dayactir ku socdo, dayactirka ka bacdiina waxaa la doonayaa in laga dhigo xarun qaxootiga la dejiyo, taas oo noqneysa xaruntii sadexaad oo qaxooti oo dhawaanahan laga hirgeliyey degamda Filipstad. Waxaan dhaci karta tirada qaxootiga ah ee degmada la soo dejiyo ay ku darto 500 oo kale. Taas oo ka micno noqoneysa in tobankii ruux mid shacabka degmada Filipstad uu noqonayo mid magangeliyo doon ah.
Haddii qaxootiga ay noqdaan kun dadka magaaladana ay yahiin 10 000, taas waxay tusaale ka micno tahay boqol kun waqti gaaban ku soo degtay magaalada Stockholm, ayuu yeri.
Maadaama qaxootiga Sweden ku soo qulqulaya ay marba marka ka danbeysa sii badaneyso ayey laanta socdaalka waxay toosh ku raadineysaa xarumo banaan oo ay dejiso qaxootiga. Dhibaatadase waxay tahay in badanaa meelaha laga helo xaruumaha banaan ay yahiin degmooyinka yaryarka ah oo ayska yartahay fursadaha ay ku saacidi karaan dadka degmadooda la soo dejiyey.
- Qatarta waxay tahay in caruurta dalka ku cusub ee degmadeena la keeno in aysan helin iskuul ay dhigtaan. Xaaladda way xuntahay. Waxaanse qabaa in qaabiladda qaxootiga ay tahay masuuliyad nawada saaran oo aan gooni u saarneyn canshuur baxiyaasha degan Filipstad. Waxayna ii la muuqataa in dowladda arrintan si ay edab ka maran tahay wax uga qabato, ayuu yeri gudoomiyaha degmadda Fillipstad Per Gruvberger oo ah mudane ka tirasan xisbiga Socialdemokraterna.